Creative Writing » မငြင်းရက်ဘူး ငြင်းရက်တယ်	5
etone says: ဟီး … ဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိ … ။ ကလေးမှ မှန်သလိုလိုနဲ့ နောက်တော့ မမှန်သလိုလိုရယ် … တိုက်လည်း တိုက်ဆိုင်တယ် ။ ကိုယ်သာဆို လူပါလာလျှင်မငှားဘူး … ငှားပြီးလျှင်လည်း လူထပ်မတင်ခိုင်ဘူး ။
တခါက ကြုံဖူးတယ် …. ကိုယ်က ဖယ်ရီနောက်ကျလို့ ကားငှားပြီး အသည်းသန်မောင်းခိုင်းနေတာကို မီးပွိုင့်မှာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ဘွားတော်တယောက်အတင်း တံခါးဖွင့်ခိုင်းပြီး ၀င်ထိုင်တယ် ။ ကားပေါ်ရောက်မှ သူသွားမယ့်နေရာကလည်း တာမွေ ကိုယ်လည်း တာမွေဆိုတော့ လမ်းကြောသင့်တယ်ပေါ့ ။ သူက လမ်းကဖြတ်ငှားတာမို့ ဈေးလည်း တ၀က်ပဲပေးရတယ် ။
ဒါကို ဘွားတော်က သူ့ အရင်ပို့ပေးပါ အရေးကြီးသတဲ့ … ။ ကိုယ်ကလည်း မရဘူး ကျမ အရင်ငှားထားတာ ကျမအရင်ပို့ပေါ့လေ ။ နောက်ဆုံး ကားသမားကို ကိုယ့်ကို အရင်မပို့ရင် ဒီနေရာမှာရပ် တပြားမှ မပေးဘူး နောက်ကား ဆင်းငှားမယ်ဆိုတော့မှ …. ကိုယ့်ကို အရင်ပို့ပေးတယ် ။ ကားပေါ်မှာ ဘွားတော်ပြောလို့ သိရတာ … စက်နဲ့ နှိပ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းဆိုလားဘာလား အဲ့ဒါတန်းစီထားတာ အလှည့်က 9ခွဲမှတဲ့ နာမည် ခေါ်လို့ မရောက်ရင် နောက် တနာရီ ထပ်စောင့်ရတယ်ဆိုလားပဲ ….. ကျမ ကားငှားပြေးနေတဲ့ အချိန်က ခွန်နာရီ 6မိနစ် …. ။
ခင်ခ says: တစ်ခါတလေ ဇွတ်တရွတ် ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာတွေဟာ နောက်ဆုံးရလာဒ်ထွက်တဲ့အခါ မှားနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားတတ်တာလေးကို အခြေတည်ပြီး ရေးဖြစ်တာပါ။ ကနဦးကွန်မန့် အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
etone says: ဟုတ်တယ် အန်ကယ်ရေ မဆုံဖြစ်တာ ကြာပြီနော် ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အပြင်မှာဆိုရင်တော့ အဲဒီကလေးမနဲ့ဆရာဝန်ကြီး ဇာတ်လမ်းဖြစ်လောက်တယ်
Ko Two says: သမီးကို ရွေး သမီးကိုရွေး